Miezaha Hanohina ny Fon’ny Olona Tsy Mpivavaka | Gazety Fianarana
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Aja Akha Albaney Alemà Altaï Amharique Amis Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuuk Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibinda Ibo Icibemba Igede Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kurde Kurmanji Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laosianina Lenje Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Makhuwa-Meetto Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Nias Niue Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Okpé Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Ouïgour (Sirilika) Palau Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin (Afrika Andrefana) Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Serbia) Samoanina Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal Édo Éwé
LAHATSORATRA FIANARANA 30
“Tonga zava-drehetra tamin’ny karazan’olona rehetra aho, mba hisy hovonjeko na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana.”—1 KOR. 9:22.
HIRA 82 ‘Aoka Hamirapiratra ny Fahazavanareo’
1. Inona no fiovana nitranga tato ho ato?
NANANA ny fivavahany foana ny ankamaroan’ny olona hatramin’izay. Nisy fiovana be anefa tato ho ato. Mihabetsaka izao ny olona lasa tsy mpivavaka. Ny ankamaroan’ny mponina mihitsy no hoatr’izany, any amin’ny firenena sasany. *—Mat. 24:12.
2. Nahoana no be dia be ny olona tsy mpivavaka?
2 Nahoana no mihabetsaka ny olona tsy mpivavaka? * Variana manao izay mahafinaritra azy angamba ny sasany, na tsy mieritreritra afa-tsy ny olana mahazo azy. (Lioka 8:14) Misy koa mpivavaka ihany taloha fa lasa tsy mino an’Andriamanitra intsony. Ny hafa indray mino an’Andriamanitra fa mihevitra hoe efa ntaolo be izany fivavahana izany dia tsy ilaina intsony. Tsy mifanaraka amin’ny siansa, hono, ny zavatra ampianarin’ny fivavahana sady tsy mitombina. Zara raha misy miresaka amin’izy ireny momba ny porofo hoe misy Andriamanitra. Ny namany sy ny mpampianatra azy ary ny olo-malaza sasany anefa mety hiresaka hoe avy amin’ny evolisiona ny zava-drehetra. Misy koa rikoriko amin’ny ataon’ny mpitondra fivavahana tia vola sy tia fahefana. Any amin’ny tany sasany indray, dia ny fanjakana mihitsy no mamoaka lalàna mba hanakantsakanana ny fivavahana.
3. Natao hanampiana antsika amin’ny inona ity lahatsoratra ity?
3 Nandidy antsika i Jesosy mba ‘hanao mpianatra ny olona any amin’ny firenena rehetra.’ (Mat. 28:19) Ahoana àry no hanampiantsika ny olona tsy mpivavaka mba ho tia an’Andriamanitra sy ho lasa mpianatr’i Kristy? Tadidio fa mety ho arakaraka izay toerana nanabeazana ny olona iray no hahatonga azy handray ny hafatra torintsika na tsia. Mety tsy hitovy, ohatra, ny ataon’ny olona avy any Eoropa sy ny avy any Azia rehefa itoriantsika. Fa maninona? Satria mahalala zavatra momba ny Baiboly ny olona maro avy any Eoropa sady efa mahazatra azy ny maheno hoe Andriamanitra no namorona ny zava-drehetra. Ny olona avy any Azia indray tsy hoatr’izany. Zara raha mahalala zavatra momba ny Baiboly ry zareo, na tsy mahalala na inona na inona momba an’izany mihitsy. Tsy mino koa angamba ry zareo hoe nisy namorona izao rehetra izao. Inona àry no azontsika atao raha te hanohina ny fon’ny olona rehetra hitantsika eny am-pitoriana, na avy aiza izy na avy aiza ary na inona na inona zavatra inoany? Natao hanampiana antsika amin’izany ity lahatsoratra ity.
TADIDIO FOANA FA METY HIOVA IZY IREO
4. Nahoana isika no tokony hanantena hoe mety hiova ny olona tsy mpivavaka?
4 Tadidio fa mety hiova izy ireo. Misy olona tsy mpivavaka lasa Vavolombelon’i Jehovah isan-taona. Efa tsara fitondran-tena ny maro amin’izy ireny talohan’izay. Naharikoriko azy ireny koa ny nahita olona mpivavaka nefa mihatsaravelatsihy. Ny hafa indray ratsy fitondran-tena ary tsy maintsy niala tamin’ny zavatra ratsy fanaony. Matoky isika hoe hanampy antsika i Jehovah, ka hahita an’ireo ‘manana toe-po tsara mba hahazoana fiainana mandrakizay’ isika.—Asa. 13:48; 1 Tim. 2:3, 4.
Raha miresaka amin’ny olona tsy mino ny Baiboly ianao, dia ataovy mifanaraka amin’izany ny fomba itorianao aminy (Fehintsoratra 5-6) *
5. Inona matetika no mahatonga ny olona handray tsara ny hafatra torintsika?
5 Miezaha ho tsara fanahy sy hahay handanjalanja. Tsy izay lazaintsika matetika no mahatonga ny olona handray tsara ny hafatra entintsika, fa ny fomba ampitantsika an’ilay izy. Tian’izy ireo raha tsara fanahy aminy isika sady mahay mandanjalanja, ary tena mitady izay hahasoa azy ireo. Tsy terentsika hihaino antsika izy ireo. Miezaka kosa isika mba hamantatra hoe nahoana izy no tsy mino an’Andriamanitra na tsy manana fivavahana. Misy, ohatra, tsy tia miresaka fivavahana amin’ny olona tsy fantany. Ny hafa indray mieritreritra hoe tsy mahalala fomba ianao raha manontany ny hevitr’olona momba an’Andriamanitra. Misy koa menatra raha vao hita mamaky Baiboly, indrindra moa hoe miaraka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Na ahoana na ahoana anefa, dia hiezaka hahazo ny fihetseham-pon’ny olona foana isika.—2 Tim. 2:24.
6. Ahoana no nataon’i Paoly mba hampifanarahana ny fitoriany tamin’izay olona niresahany? Ahoana no azontsika anahafana azy?
6 Inona no azo atao raha tsy mampahazo aina azy ny maheno teny sasany, ohatra hoe “Baiboly”, “famoronana”, “Andriamanitra”, na “fivavahana”? Azo atao mifanaraka amin’izany ny zavatra resahina aminy. Hoatr’izany no nataon’ny apostoly Paoly. Nampiasa ny Soratra Masina izy rehefa niresaka tamin’ny Jiosy. Rehefa niresaka tamin’ny filozofa grika tany amin’ny Areopago kosa izy, dia tsy nampiseho mihitsy hoe avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra noresahiny. (Asa. 17:2, 3, 22-31) Afaka manahaka an’i Paoly koa isika. Raha tsy mino ny Baiboly, ohatra, ilay olona, dia tsara raha tsy aseho mivantana hoe avy ao ny zavatra resahintsika. Ary ahoana raha hitantsika hoe mety ho menatra izy raha tazan’ny olona mamaky Baiboly miaraka amintsika? Azo atao ny mitady hevitra hafa mba hampisehoana andinin-teny aminy, ohatra hoe amin’ny telefaonina na tablette.
7. Inona no modely nomen’i Paoly ao amin’ny 1 Korintianina 9:20-23, ary ahoana no azontsika anahafana azy?
7 Miezaha hahazo ny fomba fiheviny ary henoy tsara izy. Tsy maintsy miezaka mamantatra isika hoe inona no mahatonga azy hanana an’izany fomba fihevitra izany. (Ohab. 20:5) Diniho indray ny nataon’i Paoly. Jiosy izy nefa nitory tamin’ny tsy Jiosy. Tsy maintsy nampifanarahany tamin’izany àry ny fomba fitoriny. Zara raha nahalala momba an’i Jehovah sy ny Soratra Masina mantsy ny olona tsy Jiosy, na tsy nahalala momba an’izany mihitsy. Inona àry no hanampy antsika hahazo tsara ny fihetseham-pon’ny olona ao amin’ny faritany sy ny fomba fihevitr’izy ireny? Mila mikaroka ao amin’ny bokintsika angamba isika, na manontany mpitory efa za-draharaha ao amin’ny fiangonana.—Vakio ny 1 Korintianina 9:20-23.
8. Inona no azo atao mba hanombohana resaka momba ny Baiboly?
8 Ny hahita olona “mendrika” no tanjontsika. (Mat. 10:11) Mba hahavitana an’izany, dia mila mampirisika ny olona hilaza ny heviny isika ary mihaino azy tsara. Izany no ataon’ny rahalahy iray any Angletera. Anontaniany aloha ilay olona hoe ahoana no hananana tokantrano sambatra, na hitaizana tsara ny ankizy, na hiatrehana ny tsy rariny. Mihaino tsara ny valin-tenin’ilay olona izy, dia avy eo milaza hoe: “Ahoana ny hevitrao momba an’ity torohevitra ity? Efa 2 000 taona lasa teo ho eo izy ity no nosoratana.” Mampiseho andinin-teny mety tsara ao amin’ny telefaoniny izy avy eo, fa tsy mampiasa an’ilay teny hoe “Baiboly” mihitsy.
MIEZAHA HANOHINA NY FON’NY OLONA
9. Ahoana no azo anampiana ny olona tsy dia tia miresaka momba an’Andriamanitra?
9 Ahoana raha tsy dia tia miresaka momba an’Andriamanitra ny olona itoriantsika? Hanohina ny fon’izy ireo isika raha miresaka zavatra mahaliana azy. Be dia be, ohatra, no tia biby. Afaka milaza àry isika hoe: “Fantatrao angamba hoe maro ny mpahay siansa naka tahaka ny biby mba hanamboarana zavatra. Ny sofin’izy ireny, ohatra, no nalaina tahaka mba hanamboarana mikrô. Ny masony indray no nalaina tahaka mba hanamboarana fakan-tsary. Araka ny hevitrao, ahoana no nampisy an’ireny biby ireny? Tongatonga ho azy ve izy ireny, sa nisy namorona?” Henoy tsara izy, dia izao lazaina avy eo: “Mety hieritreritra isika hoe: ‘Ny asan’iza no dinihin’ny mpahay siansa rehefa mandinika ny biby izy?’ Nahaliana an’ahy ny zavatra noresahin’ny mpanao tononkalo taloha izay. Hoy izy: ‘Ilay nanao ny sofina indray ve no tsy handre? Ary Ilay namorona ny maso ve tsy hahita? [Izy] Ilay manome fahalalana ny olona.’ Miaiky koa ny mpahay siansa sasany hoe nisy namorona izao rehetra izao.” (Sal. 94:9, 10) Afaka mampiseho video avy ao amin’ny jw.org® isika avy eo. (Midira ao amin’ny ZAVATRA MISY > VIDEO > FANADINADINANA SY FITANTARANA > HEVITRY NY OLONA MOMBA NY NIANDOHAN’NY FIAINANA.) Na azontsika omena azy ilay bokikely hoe Nisy Namorona ve Izao Rehetra Izao? na ilay hoe Ahoana no Nampisy Antsika? Fanontaniana Dimy Mila Dinihina.
10. Ahoana koa no azo atao raha sendra olona tsy dia tia miresaka momba an’Andriamanitra?
10 Te hanana hoavy sambatra ny ankamaroan’ny olona. Be dia be anefa no matahotra hoe ho potika ny tany, na tsy ho azo iainana intsony eto amin’ny hoavy. Milaza ny mpiandraikitra ny faritra iray any Norvezy hoe matetika no tia miresaka momba ny zava-mitranga maneran-tany ny olona, na dia tsy te hiresaka momba an’Andriamanitra aza. Izao no lazainy rehefa avy miarahaba ny olona itoriany izy: “Ahoana no fahitanao ny hoavintsika? Mety hihatsara ihany ve? Iza no tena azo antenaina hanatsara an’izany, araka ny hevitrao? Ny mpanao politika ve, sa ny mpahay siansa, sa olon-kafa?” Rehefa avy mihaino tsara an’ilay olona izy, dia mamaky na miresaka andinin-teny manazava hoe ho tsara ny hoavy. Lasa liana ny olona sasany raha vao mahafantatra ny fampanantenan’ny Baiboly hoe haharitra mandrakizay ny tany, ary hipetraka eto mandrakizay ny olona manao ny tsara.—Sal. 37:29; Mpito. 1:4.
11. Nahoana isika no tokony hanovaova ny fomba anombohantsika resaka? Ahoana no azontsika anahafana ny nataon’i Paoly ao amin’ny Romanina 1:14-16?
11 Tokony hanovaova ny fomba anombohantsika resaka isika. Nahoana? Satria tsy mitovy ny olona. Ny zavatra mahaliana ny olona iray, mety hahasosotra ny olona iray hafa. Tsy mampaninona ny olona sasany raha tonga dia miresaka momba an’Andriamanitra na ny Baiboly ianao, fa ny sasany indray aleony zavatra hafa aloha no resahina. Na ahoana na ahoana anefa, dia tokony hanararaotra hitory amin’ny karazan’olona rehetra isika. (Vakio ny Romanina 1:14-16.) Tadidio koa fa i Jehovah no mampitombo ny voan’ny fahamarinana ao am-pon’ny olona tia ny tsara.—1 Kor. 3:6, 7.
AHOANA NO ITORIANA AMIN’NY OLONA AVY ANY AZIA?
Be dia be ny mpitory miahy ny olona avy any amin’ny firenena tsy kristianina, ary mampahafantatra azy ireo ny torohevitra mahasoa ao amin’ny Baiboly (Fehintsoratra 12-13)
12. Inona no azontsika atao mba hitoriana amin’ny olona sasany avy any Azia?
12 Maro amin’ny mpitory eran-tany no mihaona amin’ny olona avy any Azia. Voasakantsakana ny fivavahana any amin’ny firenena sasany any. Betsaka amin’ny mponina any no mbola tsy nieritreritra tsara hoe misy ve ny Mpamorona sa tsia. Misy te hahafanta-javatra dia manaiky hianatra Baiboly. Ny sasany indray tsy liana amin’ny voalohany, satria vaovao be aminy ny zavatra resahin’ny Baiboly. Ahoana no hanampiantsika azy ireo? Nahita vokatra tsara ny mpitory sasany za-draharaha, rehefa niresadresaka fotsiny aloha sady niezaka ho tsara fanahy. Rehefa hitany hoe mety, dia notantarainy tamin’ilay olona hoe nihatsara ny fiainany rehefa nanaraka ny toro lalan’ny Baiboly izy.
13. Inona no mety hahatonga ny olona ho liana amin’ny Baiboly? (Jereo ny sary eo amin’ny fonon’ity gazety ity.)
13 Ny torohevitra feno fahendrena ao amin’ny Baiboly no manintona ny olona maro amin’ny voalohany. (Mpito. 7:12) Hoy ny anabavy iray mitory amin’ny olona miteny Sinoa any New York: “Miezaka mamantatra ny mombamomba azy aho dia mihaino tsara. Raha vao haingana izy no tonga teto Etazonia, dia anontaniako hoe: ‘Efa tamana ve ianao? Ary efa nahita asa? Mandray tsara anao ve ny olona?’” Manampy an’ilay anabavy mba hiresaka momba an’izay lazain’ny Baiboly izany indraindray. Mety hanontany an’ilay olona izy avy eo hoe: “Araka ny hevitrao, inona no tena tokony hatao raha te hifandray tsara amin’ny olona? Misy ohabolana avy ao amin’ny Baiboly mba tiako haseho anao. Mety ve? Ity ilay izy: ‘Ny fiandohan’ny fifandirana dia toy ny mamaky tohodrano, koa mialà dieny mbola tsy raikitra ny fifamaliana.’ Ianao ve mieritreritra hoe mety hanampy antsika hifandray tsara amin’ny olon-kafa izany?” (Ohab. 17:14) Rehefa miresaka tsara hoatr’izany isika, dia ho hitantsika raha liana ilay olona ka tokony hotsidihina.
14. Ahoana no ataon’ny rahalahy iray rehefa misy milaza hoe tsy mino an’Andriamanitra?
14 Ahoana indray raha milaza ilay olona hoe tsy mino an’Andriamanitra izy? Efa zatra mitory amin’ny olona tsy mpivavaka ny rahalahy iray any amin’ny firenena iray any Azia. Hoy izy: “Rehefa milaza ny olona atỳ hoe: ‘Izaho tsy mino an’Andriamanitra’, dia ny andriamanitra ivavahan’ny ankamaroan’ny olona atỳ no tiany holazaina. Izao no havaliko azy matetika: ‘Olombelona ihany aloha no nanamboatra an’ireny andriamanitra ireny e! Dia tsy tena andriamanitra izany ireny.’ Vakiko avy eo ny Jeremia 16:20 hoe: ‘Mahavita manao andriamanitra hivavahany ve ny olombelona? Tsy tena andriamanitra no vitany.’ Dia anontaniako izy hoe: ‘Ahoana no ahafantarantsika hoe iza no tena andriamanitra, dia iza no tsy izy?’ Henoiko tsara ny valin-teniny, dia vakiko ny Isaia 41:23 hoe: ‘Lazao izay zavatra hitranga any aoriana, mba hahafantaranay fa andriamanitra ianareo.’ Avy eo aho manome ohatra iray mampiseho hoe vitan’i Jehovah ny manambara ny hoavy.”
15. Inona no azo ianarana avy amin’ny rahalahy iray any Azia Atsinanana?
15 Azo andraisana lesona koa ny ataon’ny rahalahy iray any Azia Atsinanana rehefa miverina mitsidika izy. Izao no nolazainy: “Omeko ohatra ilay olona mba hahitany hoe mahasoa ny torohevitry ny Baiboly, ary tanteraka marina ny faminaniana voalaza ao. Iresahako momba ny kintana sy ny planeta koa izy. Asehoko aminy avy eo hoe porofoin’izany rehetra izany fa tena misy ny Mpamorona ary hendry izy. Rehefa manomboka manaiky an’izany ilay olona, dia asehoko azy izay lazain’ny Baiboly momba an’i Jehovah.”
16. Araka ny Hebreo 11:6, nahoana ny olona ampianarintsika no mila mino an’Andriamanitra sy ny Baiboly? Ahoana no azontsika anampiana azy ireo?
16 Raha tsy mpivavaka ny olona ampianarintsika Baiboly, dia tokony hampiantsika foana izy mba hino sy ho resy lahatra kokoa fa misy Andriamanitra. (Vakio ny Hebreo 11:6.) Tokony hampiantsika hatoky ny Baiboly koa izy. Mila mamerimberina hevitra sasany angamba isika. Isaky ny mampianatra azy, ohatra, isika dia mety handinika porofo hoe Tenin’Andriamanitra tokoa izy io. Anisan’izany ny faminaniana efa tanteraka, na porofo hoe mifanaraka amin’ny siansa sy ny tantara ny Baiboly. Azo atao koa ny miresaka hoe ahoana no anampian’izy io antsika eo amin’ny fiainana andavanandro.
17. Inona no mety ho vokany raha asehontsika amin’ny olona hoe tiantsika izy ireny?
17 Manampy ny olona ho lasa mpianatr’i Kristy isika rehefa maneho fitiavana azy ireo, na mpivavaka izy na tsia. (1 Kor. 13:1) Tiantsika haseho aminy hoe tia azy Andriamanitra ary tian’Andriamanitra ho tia azy koa izy. Izany no tanjontsika rehefa mampianatra. Olona an’arivony isan-taona no atao batisa satria lasa tia an’Andriamanitra, na dia zara raha liana tamin’ny fivavahana aza taloha. Misy aza tsy mpivavaka mihitsy. Tadidio foana àry fa mety hiova ny olona, ary asehoy amin’ny karazan’olona rehetra hoe tianao izy ireny ary mitady izay hahasoa azy ianao. Henoy tsara izy ireny ary miezaha hahazo ny fomba fiheviny. Miezaha mba ho modely hotahafiny, amin’izay izy ho lasa mpianatr’i Kristy.
Inona no tokony hotadidintsika rehefa manompo isika?
Inona no azontsika atao raha te hanohina ny fon’ny olona tsy mpivavaka isika?
Nahoana isika no tokony hitory amin’ny olona rehetra?
HIRA 76 Hoatran’ny Ahoana Moa?
^ feh. 5 Mihabetsaka izao ny olona tsy mpivavaka maneran-tany. Mety hahita olona hoatr’izany isika rehefa mitory. Ahoana no azontsika atao mba hiresahana ny fahamarinana ao amin’ny Baiboly amin-dry zareo? Ary ahoana no hanampiana an-dry zareo hino an’i Jehovah Andriamanitra sy ny Baiboly? Izany no horesahina ato.
^ feh. 1 Araka ny tatitra, dia ireto ny sasany amin’ireo firenena ireo: Albania, Alemaina, Aostralia, Aotrisy, Azerbaïdjan, Chine, Danemark, Espaina, Frantsa, Holandy, Hong-Kong, Irlandy, Israely, Japon, Kanada, Korea Atsimo, Norvezy, Repoblika Tseky, Royaume-Uni, Soeda, Soisa, Vietnam.
^ feh. 2 FANAZAVANA: Tsy mpivavaka no iantsoana ny olona tsy mino an’Andriamanitra na tsy manana fivavahana, ato amin’ity lahatsoratra ity.
^ feh. 54 SARY: Rahalahy miasa amin’ny hopitaly, dia mitory amin’ny mpiara-miasa aminy. Mijery ny jw.org ilay olona avy eo.